बिहान उठेर के गर्ने -के नगर्ने ?, विहानै कालो चिया खाने कि सेतो चिया - Digital Khabar
१८ आश्विन, काठमाडौं । बिहान उठेर के गर्ने -के नगर्ने भन्ने बिषयमा भन्नुपर्दा तपाई हामी भन्दै आइरहेका हुन्छौं दिनको संकेत विहानले देखाउँछ । त्यसैले बिहान जस्तो कर्म गर्छौं त्यसको प्रभाव दिनभरि रहन्छ । शास्त्रमा पनि लेखिएको कुरा हो । हामीले दैनिक जिवनमा अनुभव लिदै आएका पनि छौं । कतिपय हाम्रा त्यस्ता सौखिन बानी हुन्छन् । वा लत हुन्छ जसले हाम्रो जीवन थाहै नपाई प्रभावित बनिरहेको हुन्छ ।
दिनभरको काम शुभ बनाउन विहान केही सकारात्मक सोच र कार्य गर्नु अनिवार्य छ । तपाईको दिन शुभ रहने र आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने विश्वास छ । अरु केही नभए पनि कम्तिमा दिनभर मुड फ्रेस त हुन्छ । स्वास्थ्य राम्रो त होला ? तपाईले यी १५ बुँदा बाहे अझै अरु पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ । विहान उठेर के गर्ने के नगर्ने भन्ने जानकारी थाहा पाइ रखौं ।
थाहा पाइराखौं के नगर्ने, गर्ने के ?
१] तपाई बिहान ढिलासम्‍म नसुत्नुस्। ब्रम्हमू्र्तको समयमा उठ्ने बानी बसाल्नुस् । सूर्य उदाउनु अगाडि उठ्नु अत्याधिक जैविक दृष्टिले राम्रो मानिन्छ । सधैं यस्तो बानी अपनाउँदा व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा शारिरिक सन्तुलन बस्दछ ।
२ ] बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल नछुनुस् । बादविवाद गर्ने काम नगर्नुस्। किनकी तपाईँको दिनको सुरुवात त्यसरी नै हुन्छ।
३ ] बिहान कसैमाथि रिस नपोख्नुस् नदेखाउनुस्। कसैले काम बिगारे पनि नरम बनिदिनुस् । सकारात्मक हुनुस् । अपशब्द त बोल्दै नबोल्नुस्।
४ ] बिछ्यौनामै पल्टेर टीभी, मोबाइल हेर्ने बानी छ भने त्यो त्याग्नुस् । जहाँ हत्‍या, हिंसा, बलात्कार वा अन्‍य जघन्‍य अपराधका समाचारहरुले बढि स्थान पाएका हुन्छन् । अब त्यस्ता विषयले तपाईको दिनको खराब सुरुवात गर्दछ । आफू प्रभावित भइन्छ । त्यस्ता समाचारबाट सकेसम्म टाढै हुनु बेस् । यद्यपि सकारात्मक सामाचार केही हेर्न भने सकिन्छ ।
५ ] उठ्ने बित्तिकै ऐना नहेर्नु होला। धेरैको यो बानी हुन्छ । यसलाई सुधार्नुस् । यसले तपाइको शरीरमा धेरै मात्रामा नेगेटिभ ऊर्जा, रोगको सम्भावना र भयको सम्भावना बढी शरीरमा उत्पन्‍न गराउँछ। बरु अफिस जाने समयमा वा फ्रेस भएर ऐना हेर्दा उपर्युक्त हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
६ ] उठ्ने बित्तिकै घरको छत, बार्दलीमा गएर आफ्नो कमलो छाया वा अरु व्‍यक्तिको पनि हेर्दै नहेर्नुस्। छायाँ हेर्नाले पनि ऊर्जा नेगेटिभ बनाइदिन्छ तपाइको शरीरमा।
७ ] जनावरहरुको तस्बिर र फोटो रुममा राख्नु भएको छ भने कृपया हेरेर नबस्नु । शास्त्रीय ढंगले जनाबरहरुको तस्बिर हेर्न उचित मानिएको छैन बिहानै ।
८ ] दूध हालेको चिया खाँदै नखानुस्। यसले स्वास्थ्य खराव बनाउँछ । ग्‍यास्ट्रिक बढाउँछ । ग्यास्ट्रिकले अल्सर, अलसरले क्‍यान्सर हुन सक्छ । आजकाल त अझ बेड टी अर्थात ओछ्याउनमै चिया खाने धेरैको बानी हुन्छ। त्यो राम्रो होइन । बरु बिहान मनतातो सबैभन्दा उत्तम हुन्छ ।
९ ] विहानै मसलेदार खाना, खैनी चुरोट र चिया छुदै नछुनु राम्रो । अब तपाइ जे खानुहुन्छ, त्‍यस्तै बन्दै जानुहुन्छ। विचार गर्नुस् ।
१० ] बिहान कालो चिया पिउनुस् वा तुलसीको पातको चिया। चिया चिनीको सट्टामा सख्खर राम्रो । तर, दुध हालेको चिया तपाईको दिनको खराव शुरुवात मात्रै होइन, त्यो बानीले जीवनभरै रोगी बनाइदिनसक्छ ।
११ ] तुलसीमा जल चढाउनु दिनहुँ बिहान नुहाई धुवाई गरेपछि तुलसीको बोटमा जल चढाउनाले देवी देवताको कृपा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । जुन घरमा तुलसी हुन्छ त्यसको रेख देख हुन्छ दिनहु पानी चढाईन्छ त्यहाँ सुख समृद्धि प्राप्त हुन्छ । तुलसीलाई भगवान विष्णुको प्रतिक मानिन्छ ।
१२ ] सूर्यलाई जल चढाउनु शास्त्रहरुमा भनिएको छ जो मानिस दिनहुँ सूर्यलाई जल अर्पित गर्छ । घर परिवार वा समाजमा उसको मान सम्मान हुन्छ । राम्रो स्वास्थको लागि पनि यो कार्य गर्नु अनिवार्य मानिन्छ । अनुहारको चमकता बढ्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
१३ ] गाईलाई रोटी ख्वाउनुहोस् सक्नु हुन्छ भने बिहान खाना बनाउने समयमा पहिलो रोटी गाईलाई ख्वाउनुहोस् । हर दिन गाईलाई रोटी ख्वाउन सकियो भने कयौ समस्याहरू हट्दै जाने विश्वास छ । घरमा अन्न र धनको कमी हुन पाउँदैन भनिन्छ ।
१४ ] योग एवं ध्यान गर्नुहोस् लामो समय सम्म स्वस्थ रहन र शरीरलाई पूmर्तिलो बनाइ राख्नको लागि सर्वश्रेष्ठ उपाय भनेको योगा हो। योगाले शरीरलाई धेरै किसिमका विमारीहरुबाट बचाउँछ। मानसिक स्थितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । ध्यानले क्रोधलाई नियन्त्रण गर्छ । मानसिक तनाब बाट मुक्ती दिलाउँछ । शरीरलाई रोग सँग लड्ने क्षमतामा वृद्धि गर्छ ।
१५ ] घरको मन्दिरमा पूजा गर्नुहोस् हरेक दिन बिहान घरमा आपूmले स्थापना गरेको मन्दिरमा दियो बाल्नु अगरबत्ति जलाउनु उत्तम कार्य मानिन्छ । दियोको उज्यालो र अगरबत्तिको धुवाँले घरको वातावरणका नकारात्मक उर्जा खतम हुन्छ भने हरेक दिन विहान घरमा बत्ति बाल्नाले वास्तुका अनुसार पनि कयौं दोषहरु हट्छन् ।
Black teabusinessCoffeeCoronavirusCovid-19digital khabarhealthLockdown